Kitendry HyperX Alloy Core sy totozy Pulsefire Core, famerenana lalina | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 02/09/2021 13:34 | Nohavaozina amin'ny 02/09/2021 13:40 | fifaninanana, General, hevitra
Ireo kojakoja antsoina hoe lalao Izy ireo dia vokatra iray izay be fangatahana indrindra ataon'ireo izay mandany andro lava eo imason'ny mpanara-maso, noho izany, totozy tsara sy kitendry manokana no singa tena ilaina hahazoana vokatra tsara mandritra ny tolakandron'ny ady nomerika. HyperX Nanolotra vokatra kalitao ho an'ny mpilalao indrindra nandritra ny taona maro izy io, ary ireto izay hofakafakainay anio dia fototra roa izay tsy azo hadino amin'ny fanamboaranao.
Mampiseho aminao ny kitendry Alloy Core sy ny totozy gaming Pulsefire Core avy amin'ny HyperX izahay mba hahafahanao mampiseho ny fahaizanao amin'ny fitaovana tsara indrindra. Toy ny hoe tsy ampy izany, ambonin'izany dia azonao atao ny maka azy ireo maimaim-poana miaraka amin'ity sombin'ny raffle izay ataonay ho anao ity, halahelo azy ve ianao?
Vao tsy ela akory izay dia nahatratra mpanjifa 10.000 tao amin'ny YouTube izahay, izay ahitanao ny fandinihana sy ny fampianarana tsara indrindra azonay, ka nanapa-kevitra ny hankalaza izany miaraka aminareo rehetra izahay. HyperX, te hiara-hiasa amin'ny alàlan'ny fanolorana kitendry antsika ny orinasa Alloy Core ary totozy Pulsefire Core, roa amin'ireo vokatra ilaina indrindra amin'ny fametrahana tsara, ka avelanay eto ny fandalinana ireo vokatra tsirairay ireo, ary ambonin'izany rehetra izany Manasa anao izahay handray anjara amin'ny raffle, ary avelanay ambanin'ny fepetra fandraisana anjara ianao:
Te handresy ity kitendry sy kitapo totozy ity ve ianao @HyperX? Mandraisa anjara amin'ny #droka ary mahazoa totozy filalaovana Pulsefire Core sy fitendry Alloy Core.
- Araho izahay?
- Fanamarihana: #HyperXActGadget#Lottery #Gaming #HyperX #Gadgetshttps://t.co/UzTO2w2DGA
- Gadget News (@agadget) Septambra 2, 2021
1 manaraka ny HyperX sy ActualidadGadget ao amin'ny Twitter
Faha-2 hisoratra anarana amin'ny fantsona YouTube an'ny ActualidadGadget
Faha-3 Omeo RT ny bitsika fisarihana
Fanamarihana faha-4 miaraka amin'ny diezy #HyperXActGadget
Faha-5 Hahazo fandraisana anjara fanampiny ianao raha maneho hevitra amin'ilay horonantsary
Miatrika fisintonana nasionaly isika, ny mpandresy dia tokony hipetraka ao amin'ny faritry ny firenena (Espana). Hanolotra ny mpandresy isika amin'ny hevitr'ilay horonantsary YouTube sy amin'ny alàlan'ny kaonty Twitter anay. Ny mpandresy amin'ny antsapaka dia holazaina ao amin'ny RRSS antsika ary hivoaka amin'ny 10/09/21 amin'ny 12ora sy sasany ny fantsona.
1 Kitendry HyperX Alloy Core
2 Mouse totozy Pulsefire Core HyperX
Kitendry HyperX Alloy Core
Kitendry membrane ity HyperX manana ny sasany lafiny 443,2 milimetatra ny sakany; 175,3 milimetatra ny halaliny ary 35,6 milimetatra ny haavony, noho izany dia hitantsika ny fitendry fitomboana habe, izany hoe eo anelanelan'ny 104 sy 105 ny lakile araka ny fenitry ny tsena. Mikasika ny lanja, somary mihoatra ny kilao handaminana azy tsara eo ambony latabatra (manokana 1.121 grama).
Izahay dia miresaka momba ny klavie misy tariby mirandrana, izay manana halavana 1,8 metatra, ampy "hanafenana" ny tariby amin'ny alàlan'ny fananganana antsika ary hanazavana azy araka izay tratra.
Mikasika ny pitsopitsony ara-teknika dia tadidinay fa fitendry membrane izy io, misy ifandraisany USB 2.0 sy ny hafainganam-pandehan'ny fandatsaham-bato 1.000 Hz. Mazava ho azy fa manana rafitra anti-ghosting multi-key izy io ary avy eo manana fanalahidy natokana ho an'ny fanaraha-maso multimedia.
Manana «maody lalao» izahay mba hampitomboana ny endri-javatra, ary toy ny fitendry tsara rehetra lalao membrane, miatrika keyboard isika izay mahatohitra fivoahan'ny rano. Manana andiana bokotra fidirana haingana ihany koa izahay izay ahafahantsika manitsy ny famirapiratana, ny maodelin'ny jiro ary ny maodin-dalao, zavatra iray izay ankafizinay indrindra rehefa mifanerasera amin'ireo menus samihafa mba hanangonana fotoana.
Azontsika atao aza ny manidy ny kitendry, raha irintsika. Izy io dia manana bara maivana misy effets enina efa voafaritra eo an-tampony: Kitapo loko, onjam-pahazavana, fisefoana, faritra dimy, ary aurora. Ireo jiro rehetra ireo dia afindra amin'ny faritra manan-danja, izay mirehitra miaraka amin'ny homogenezy, fa raha aleontsika, amin'ny alàlan'ny rindrambaiko dia afaka manitsy tsy tapaka ny lakile isika. Faritra dimy misy loko.
Amin'ny maha-keyboard membrane azy dia manome valiny tsara ary mazava ho azy fa fahasamihafana miavaka amin'ireo fitendry mekanika, ny tena mangina tokoa. Toy izany koa, ny dia ataon'ny lakile dia mitovy amin'ny an'ny keyboard mekanika ary misy valiny haingana. Ity fitendry ity, ho fanampin'ny Windows mifanentana, Izy io dia mifanaraka amin'ny PS4, PS5, Xbox Series X / S ary Xbox One. Tsy misy isalasalana, safidy mahaliana izay manodidina ny 50 euro eo amin'ny tranonkala ofisialin'i HyperX ary ao fivoahana mahazatra.
Mouse totozy Pulsefire Core HyperX
Ny totozy dia manan-danja na manan-danja kokoa noho ny klavier tsara, noho izany dia miroso amin'ny famakafakana ilay namana tonga lafatra isika, ny Pulsefire Core avy any HyperX. Manana totozy ergonomika simetrika isika izay manana refy 119,3 milimetatra ny halavany, 41,30 milimetatra ny haavony ary 63,9 milimetatra ny haavony. Ny lanjany, raha tsy manisa ny tariby isika dia 87 grama, miaraka amin'ny tariby dia mahatratra 123 grama izy io, ka io totozy io dia somary maivana ao anatin'ny faritra misy azy.
Ny tariby, antsipiriany lehibe, 1,8 metatra ny halavany, hahafahanao mahazo fivezivezena ary manitsy mora foana amin'ny filan'ny fanamboaranay. Ity tariby USB ity dia teknolojia 2.0.
Tackle fampisehoana miaraka amin'ny sensor Pixart PAW3327 miaraka amina vahaolana 6.200 dpi sy andiana preset misy bokotra ambony 800/1600/2400 sy 3200 dpi arakaraka ny tsiron'ny mpampiasa tsirairay. Ny hafainganam-pandeha dia 220 IPS ary ny hafainganam-pandeha farany ambony dia 30G. Andao hitifitra bokotra 7 feno, izay manome antoka ny androm-piainan'ny tsindry 20 tapitrisa.
Tsy afaka ny jiro RGB LED miaraka amin'ny faritra misy jiro ary haavo hazavana efatra mba ahafahantsika manitsy azy io arakaraka ny zavatra tiantsika na ilaintsika. Amin'ny lafiny iray dia manana a Taham-pifidianana 1000 Hz ary endrika data an'ny 16 bitika / axis. Toy ny amin'ny klavier teo aloha, ity totozy ity dia mifanaraka amin'ny PC, ary koa PS5, PS4, Xbox Series X / S ary Xbox One, noho izany ny fifanarahana dia tsy tokony ho olana.
Manana andian-skates amin'ny habeny malaza izahay ary koa misy kojakoja ao amin'ilay boaty. Mitovy amin'ny fitendry, rindrambaiko fampidinana maimaim-poana HyperX NGenuity Hamela antsika hanatanteraka fanitsiana, indrindra amin'ny fanaingoana ny jiro. Ny bokotra fito dia azo programa ihany koa. Amin'ny lafiny iray, ny totozy dia manana vidiny antonony izay hijanona eo amin'ny 35 euro eo amin'ny tranonkala ofisialin'i HyperX ary ao toeram-pivarotana hafa.
Kitendry combo sy totozy mety tsara ho an'ny mpilalao indrindra amin'ny vidiny mirary, Inona no andrasanao handray anjara amin'ny raffle-tsika ary hahazo ity fonosana keyboard sy totozy maimaimpoana ity? Aza very io vintana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Kitendry HyperX Alloy Core sy totozy Pulsefire Core, mpiara-milalao tonga lafatra [SWEEPSTAKES]
Asgor dia hoy izy:
Mandray anjara amin'ny raffle
Mamaly an'i Asgor